Ruush, 18 Feb 2014(Alldhooftinle.com)
Ka Baro Tuuganimada Cilmiyeysan Dmitry Argarkov. Waa Tuug Khabiir Ah, Waa Tuug Si Badheedh Ah Qaanuunka Iyo Qalinka Wax Ugu Dhaca.
Bangi ka mid kuwa ugu waaweyn ee daynta bixiya dalka Ruushka oo la yiraahdo Tinkoff Credit Service ayaa dacwad ku soo oogay nin 42 jir ah oo la yiraahdo Dmitry Argarkov waxayna ku eedeeyeen inaanu laba sano bixin lacagtii daynta ahayd iyo dulsaarkeediiba. Laakiin Mr.Argarkov wuu diidey eedeyntaa wuxuuna ku adkaystay inaanu wax qalad ah samayn.
Arinta dhex martay bangiga iyo Argarkov waxay bilaabatay markii uu Argarkov qaatay arjiga codsiga daynta, ka dibna uu waxyaabo badan oo ku qornaa arjiga bedeley, wuxuu bedeley dulsaarka ama ribadda oo uu zero ka dhigay, wuxuu kaloo ku qortay inaanu jirin wax ganaax ah, oo hadii uu la daaho iyo haduu bixin waayoba aan waxba loo raacayn. Lacagta uu qaadan karo ayuu ka dhigtay mid xadidnayn isla markaana uu intuu doono qaadan karo.
Subixii ayuu la yimi arjigii bangiga, haweeneydii bangiga joogtay ma aanay akhrin arjiga waxaanay kula degdegtay saxeexa iyadoo u haysata in wax waliba sidii ay u qoreen yihiin. Haweeneydaa oo hadda shaqada laga eryey ayaa ku calaacashay in shaqadoo ku badnayd iyo iyadoo aan weligeed arkin tuugaa oo kale ay sabab u ahayd inay saxeexa ku jiido.
Xaakimkii maxkamada wuxuu go'aamiyey in heshiiskaa dhex maray bangiga iyo Argarkov uu sax yahay isla markaana uu ka codsanayo Mr. argarkov inuu bixiyo wuxuu jecel yahay bil kasta maadaama aan heshiisku sheegeyn.
Xaakinka ayaa sheegey in bangiyadu ay yihiin kuwa bilaabay inay dadweynaha wax u qariyaan, maantana ay tahay inay ogolaadaan markooda.
Bangiga Tinkoff oo leh looyaro badan ayaa ku guuldareystay inay ka dhaadhiciyaan maxkamadu inay ugu yaraan soo xidho ninka bedeley qoraalkoodii kuna bedeley siduu isagu jeclaa.